केटीलाई प्रभाव पार्ने केटाका ७ बानी, तपाईंमा कुन कुन छन् ? « Khabarhub
केटीलाई प्रभाव पार्ने केटाका ७ बानी, तपाईंमा कुन कुन छन् ?
हरेक युवती चाहन्छन् आफ्नो जीवनसाथीमा स्पेशल गुण होस् । उसको हरेक ब्यवहार अरुभन्दा विशेष होस् ।
हुनत केहि केटाहरुमा यस्तो स्पेशल बानी हुने गर्दछ । जसलाई केटीहरुले साह्रै मन पराउँछन् । आमअवस्थामा केटाहरु केटीलाई आफूप्रति आकर्षित र प्रभावित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । तर केटाहरुमा हुने केहि बानीले भने केटीलाई बिना मेहनत सजिलै प्रभावित पार्दछ । के के हुन् केटीलाई इम्प्रेश पार्ने केटाका बानिहरु ?
हरेक केटी मानिसको चाहाना हुन्छ, उनको प्रेमी वा जीवनसाथी आफु प्रति ईमान्दारहोस् । आफु बाहेक अरु कोहिसंग नजिस्कियोस् वा अरुप्रति आर्कषित नहोस् । उनीहरुलाई इम्प्रेश गर्न मात्र कोहि केटा ईमान्दार छ भने उसको यो मात्र काफी हुन्छ ।
केटीहरुलाई ती केटा साह्रै मन पर्दछ । जसमा सबै ब्यक्तिको सम्मान र आदर गर्ने बानी हुन्छ । केटीहरु यस्ता स्वभाव भएका केटासँग मित्रतागर्न र जीवन शैली बनाउन खोज्दछन्् । किनकी उनीहरुलाई थाहा छ, सबैको सम्मान र आदर गर्ने ब्यक्तिबाट कहिल्यै गलत ब्यवहार हुदैँन ।
कतिपय अवस्थामा साना गल्ती वा कारणको सहारामा केहि केटाहरु केटीबाट टाढा हुने गर्दछन् । तर केटी मान्छे आफुलाई हर हमेशा जस्तोसुकै परिस्थितिमा साथदिने ब्यक्तिको खोजीमा हुन्छन् ।
कोहि केटामा यी बानी भेटेमा उनीहरु केटीको नजरमा आफै पर्ने गर्दछन् ।
केटी मानिसमा आफ्नो कुरा सुनाउने बानी स्वभावतः केटाभन्दा बढी हुन्छ । यस्तोमा कुनै केटा उनीहरुको कुरा बिना रोकटोक ध्यानपुर्वक सुनिदिन्छ भने यसले पनि केटी मानिसलाई प्रभावित पार्दछ ।
तसर्थ आफ्नो कृुरा सुनाउनुको सट्टा उनीहरुको कुरा सुन्नमा ध्यान दिनुहोस् ।
प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७७, मंगलबार ९ : ५६ बजे